Ra’iisul wasaaraha Dalka oo kormeeray dagmooyinka uu ka socdo howl-galka xasilinta Muqdisho . | AllPuntland.net
Ra’iisul wasaaraha Dalka oo kormeeray dagmooyinka uu ka socdo howl-galka xasilinta Muqdisho .
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Fadaraalka ah ee Soomaaliye Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kormeer uu ku ogaanayeen sida ay xiliga habeenkii ah u shaqeeyaan Ciidamada dowladdu u xilsaartay Hub ka dhigista Muqdisho ku tagay qaar kamid ah Dagmooyinka uu howl-galku ka socday .
Ra’iisul wasaaraha soomaaliya waxaa socdaalkaan lugta ah ku wehelinayay Wasiirka Aminiga iyo taliska ciidanka Nabad-sugida waxaay warbixino ka dhagaysteen saraakiisha ka howl-galayay goobaha ay tageen oo ay ka mid ahaayeen dagmooyinka Wadajir, Hodan, Howl-wadaag, Warta nabada, Yaaqshiid, Waaberi, Xamar-weyne, Shangaani iyo Cabdalcasiis.
Askarta howl-galka ku jiray ayaa mujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin gudashada waajibadka Qaran , Ra’iisal wasaaraha Dalka ayaa ku dhiiri galiyay in ay heli doonaan xuquuqdooda si ay u sii horumariyaan , xasilinta muqdisho iyo guud ahaan waajibaadka ciidan ee saaran .
Dhinaca kale Ra’iisul wasaaraha dalka waxaa uu xog wareysi la yeeshay qaar kamid ah Dhalinyaradda goobaha uu booqday , Kheyre ayaa umuujiyay dhalinyaraadda dhiirigalinta dowladu la garabtaagantahay si ay ula shaqeeyaan laamaha amaanka dalka .
HOOSK KA DAAWO SAWIRADDA.